စမ်းချောင်းတဝိုက် ဟော့ပေါ့စားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ‘ရွှေနန်းတော်’ ဟော့ပေါ့ဆိုင်သစ် 690 views
စမ်းချောင်းတဝိုက် ဟော့ပေါ့စားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ‘ရွှေနန်းတော်’ ဟော့ပေါ့ဆိုင်သစ်
စမ်းချောင်း၊ ရှမ်းလမ်းမီးပွိုင့်အနီး၊ မကြာသေးမီကမှဖွင့်ထားတဲ့ ဗားကရာလမ်းမပေါ်က ဟောင်ကောင်စတိုင်လ် အရသာနဲ့ရွှေနန်းတော်ဟော့ပေါ့ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရွှေနန်းတော်ဟော့ပေါ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ ဘာတွေရနိုင်လဲ၊ဈေးနှုန်းတွေကဘယ်လောက်လည်း၊ဘယ်လို Service တွေရှိသလဲဆိုတာ ကဲ…. ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် !
ရွှေနန်းတော်ရဲ့ဟော့ပေါ့စတိုင်က ဟောင်ကောင်စတိုင်ပါ။ သူ့ဆီမှာ Set လေးတွေလည်းရှိသလို၊ ALa Cert လည်းရှိတယ်။ Set မှာဆိုရင် ဈေးနှုန်းတွေက ( ၈၀၀၀)ကနေ (၁၅၈၀၀)အထိရှိတယ်။ ဟင်းရည်တွေကကြက်သားတစ်မျိုးတည်းနဲ့အခြေခံပြီး လုပ်ထားတဲ့အတွက် ဝက်သားမစားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသလို၊ အရသာမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးစားသုံးနိုင်ပါတယ်။
အအေးကလာစားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို Free Flow ပေးထားပါတယ်။ အချိုပွဲအတွက် ရေခဲမှုန့် ကိုFreeစီစဉ်ထားပေးတယ်။ A La Certဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်item တွေရွေးချယ်စားသုံးလို့ ရပါတယ်။ အမဲသား၊၀က်သား၊ဆိတ်သား၊ကြက်သား၊ ပင်လယ်စာ၊မှို၊ချိစ်ငါးအသားလုံးနဲ့ အသီးအရွက် အစုံအလင်ရတဲ့အပြင်ဖက်ထုတ်ကြော်လည်းရှိတယ်။ အသားလွှာမှာဆိုရင်ပဲ အသားတစ်မျိုးစီမှာမှ အမျိုးအစားတွေအစုံရှိသေးတယ်။ အသီးအရွက်ကတော့ (၈၀၀)၊ (၁၀၀၀)ပဲ။ အသားလုံးတွေကတော့ (၂၀၀၀)ကနေ(၃၀၀၀)အထိရှိတယ်။ အခြားဟော့ပေါ့နဲ့တွဲစားလို့ကောင်းတဲ့ အကြော်တို့ ပဲပြားတို့၊ ဂဏန်းနီချောင်းတို့အပြင် Can Drinks တွေဘာတွေလည်းရတယ်။
ဟောာ့ပေါ့နဲ့ပတ်သတ်လို့အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ဒီမှာတစ်မူထူးခြားတဲ့ Spicy Chicken Hot Pot ဆိုတာရှိတယ်။ အရသာကနည်းနည်းလေးစပ်သလိုရှိပေမယ့် အကုန်လုံးစားလို့ရနိုင်မယ့်အရသာမျိုးပါ
အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဆို အဲ့ဒီ Set မှာပါတဲ့ကြက်သားက အသီးရွက်တွေဘာတွေနဲ့ ချက်ထားပြီးသားလေး။ ပြီးတော့ ဟင်းရည်လည်းသပ်သပ်ပါတယ်။ သူ့ကိုစားရတဲ့ပုံစံမျိုးကတစ်မျိုးလေးပဲ။ စ စားတုန်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုစားရမှန်းမသိလို့ ဆိုင်ကိုမေးကြည့်ပြီးမှစားခဲ့ရလို့ စားတဲ့ပုံစံလေးကိုလဲ ပြောပြပေးအုံးမယ်။
ကြက်သားအိုးနဲ့ ဟင်းရည်(ဟင်းချိုရည်)ကခွဲပြီးမှာလာချတာပါ။ ကြက်သားတွေကို အရင်စားပြီးမှ ဟင်းရည်ထည့်ရတယ်။ ဟင်းရည်နဲ့ ကြက်သားအိုးထဲ့ကအနှစ်လေးတွေရော သွား တဲ့အချိန် ဟင်းရည်အရသာတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။အဲဒီအချိန်ကြမှ ကျန်တဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့အသားတွေကိုဖြေးဖြေး သုံးဆောင်လို့ ရတယ်။ ဟော့ပေါ့တစ်မျိုးကိုပုံစံနှစ်မျိုးစားလို့ ရတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ (၁၂၀၀၀)ကျပ်ပါ။ ဟော့ပေါ့ကိုမှပုံစံအသစ်အဆန်းလေးနဲ့စားလိုက်ရသလိုပဲပေါ့။
ဟင်းရည်အရသာတွေမှာဆိုရင် အချို၊ ဟောင်ကောင်အရသာ၊ မာလာအစပ်၊ တုန်ယမ်းနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ဆိုပြီးရှိတယ်။ အကြိုက်များဆုံးက တုန်ယမ်းဟင်းရည်ပါ၊သူ့ အရသာက အချဉ်စူးစူးလေး။ အစပ်သိပ်မပါတော့ ကလေးတွေနဲ့ အစပ်မစားနိုင်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်အဆင်ပြေမှာပါ။ မာလာအနှစ်မှာဆိုရင် အနံ့လေးကသင်းသင်းလေးနဲ့။ အက်မင်တော့ အဲ့မာလာကိုသဘောကျတယ်။ နောက် ဟောင်ကောင်အချိုကတော့ပုံမှန်အချိုပါပဲ။ ဒီဆိုင်မှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးစားကောင်းတာလေးက ဖက်ထုပ်ကြော်လေ။ ဖက်ထုပ်ကြော် ရွရွ၊ မွမွလေးကိုမှ ရွှေနန်းတော်ချဉ်စပ်ဆော့စ်လေးနဲ့တွဲစားရင်တော့ ပိုစားကောင်းတယ်
ဆိုင်ပုံစံလေးက အပြင်အဆင်လေးတွေကရိုးရိုးလေးနဲ့ အရောင်လေးတွေကလည်း အငြိမ်လေးနဲ့ဆိုတော့ မျက်စိအေးတယ်။ ထိုင်ရတာလည်း အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်။
အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ် နှစ်ထပ်ရှိတယ်။ အပေါ်ထပ် VIP Zone ထဲ့မှာ VIP ခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။Company၀န်ထမ်းတွေအုပ်စုလိုက်စားဖို့ ၊ partyပွဲတွေလုပ်ဖို့ အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းတယ် အဲ့ဒီကညီမလေးတွေလည်းပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ Service ပေးသွားကြတာ၊ စိတ်ကျေနပ်စရာ။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်နဲ့ ညစာစားချိန်တွေဆိုရင်တော့ လူကျတတ်တယ်။ (နေရာမရမှာပူနေရင် Booking လေးလုပ်လိုက်ပေါ့နော်)
ရွှေနန်းတော်မှာ အက်မင်အကြိုက်ဆုံး Feature တစ်ခုက စားပွဲဝိုင်းတိုင်းမှာ အားသွင်းလို့ရတယ်။ Charger မပါဘူးလား။ ရတယ်။ Plug ခေါင်းပါပါတယ်။ iPh မို့ရပါ့မလားစိတ်ပူနေသေးလား။ မပူနဲ့ iPh အတွက်လည်းရတယ်။ စားနေရင်းသောက်နေရင်းမို့ ဖုန်းကိုပေမှာ ဖုန်းပေါ်တခုခုကျမှာစိုးရိမ်နေလား။ အားသွင်းနေရက်နဲ့အဲ့ဒီလိုတွေမဖြစ်ရအောင် အိတ်လေးထဲထည့်ထားပေးတယ်။ ပြီးရင်ဘေးမှာချထား။ တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသား။ ဒီဟာလေးကို Service လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေးထားလို့ အက်မင်တော့ တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီဆိုင်လေးက အဲကွန်းတော့တော်တော်နိုင်တယ်။ စားနေရင်းနဲ့လည်း ခပ်အေးအေးလေးပဲ။ ဒီလိုမျိုးမှဟော့ပေါ့စားရတာအဆင်ပြေတာ။
ဒီဆိုင်မှာပရိုမိုးရှင်းလေးရှိတယ်တဲ့။ မေလ (၃၁)ရက်နေ့တဲ့။ အဲ့ဒါကဘာပရိုမိုးရှင်းလည်းဆို ဒီဆိုင်ရဲ့ Pamphlet လေးတွေကိုဆိုင်အနီးတဝိုက်မှာ ဝေထားတယ်ပြောတယ်။ အဲ့ဒီ Pamphlet နဲ့လာစားရင် မနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ညနေ(၄)နာရီအထိဆိုရင် မီနူးအားလုံးမှာ 50% တောင် လျှော့ပေးမှာ။(တစ်ဝိုင်းကိုတစ်ရွက်ပဲသုံးရမှာပါ) ညနေ(၄)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီခွဲအထိဆိုရင်တော့တစ်ယောက်ကို (၂၀၀၀)ကျပ်လျှော့ပေးတယ်တဲ့။ (ဒီအတွက်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ရွက် သုံးလို့ရပါတယ်။) အကယ်၍ကိုယ့်မှာ Pamphlet မရှိရင်လည်းမပူနဲ့။ ပထမတစ်ခါစားပြီးရင် သူတို့ပေးလိုက်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခါတွေကျ သုံးပေါ့။
ဆိုင်ကမနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ည(၁၁)နာရီအထိဖွင့်တယ်။ ပါဆယ်ဝယ်ချင်လည်းရတယ်တဲ့။ လိပ်စာက အမှတ် (၁၂၂)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ရှမ်းလမ်းမီးပွိင့်အနီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာပါ။ Reserve လုပ်ချင်တယ်ဆို 01-2304966 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
စမ်းချောင်းအနီးတဝိုက် ဟော့ပေါ့ဆိုင်ဘာဆိုင်တွေရှိလည်း မေးနေသူတွေအတွက် ပြန်ညွှန်းပေးခဲ့ပါပြီနော်။
#Shwe_Nan_Taw #Hot_Pot #Hot_Pot_Restaurant_in_Yangon #Hot_Pot_Lover #Hot_Pot_Crazy